INkonzo yeeNkonzo zoMatshini ze-CNC kunye noMvelisi | Ukwenziwa kwentsimbi yeHengli
Sinikezela ngeenkonzo ezahlukeneyo zobuchwephesha kubandakanya ukubetha, ukubhola, kunye nokubetha. U-Hengli liQela elinamalungu oomatshini anamava e-CNC, iinxalenye zomatshini ze-CNC, i-CNC eguqukile, kunye nabenzi bezahlulo ze-CNC. Inkonzo ye-One-Stop ye-CNC yokubonelela enikezelwa yinkokeli yeqela, eyenzelwe ukuphuhlisa kunye neeprojekthi zokuvelisa.
I-Machining Workshop yethu inabasebenzi abamalunga nama-70, kukho iiseti ezili-13 zamaziko machining e-CNC, iiseti ezi-6 zokubala kwe-CNC kunye namaziko okubetha, 1 iseti ye-CNC ethe tyaba kunye nomatshini wokugaya, kunye nezixhobo ezahlukeneyo zokwenza machining: kubandakanya i-8m long lathe, Iiseti ezi-3 zokujika komatshini, iiseti ezili-9 zoomatshini be-lathe be-CNC, iiseti ezi-4 zoomatshini bokugaya.
I-Hengli Metal Processing yinkampani ethe nkqo yentsimbi eyila kunye neenkonzo ezizodwa zokusika i-laser tube-cutting ezinikele ekufezekiseni zonke iimfuno zakho zesinyithi. Ukusebenza ukusukela ngo-2002, inkampani yethu ibonelela ngoluhlu olupheleleyo lweenkonzo zokuphela kweziphelo ezisusela kuncedo loyilo lobunjineli, uhlalutyo lweendleko, ukuqokelela, ukuveliswa kunye nokubonelelwa kwempahla. Umsebenzi wethu wenziwa kwi-50,000 sq. M. Indawo kunye nokugoba, ukuwelda, ukusika i-laser kunye ne-tube-laser ukusika, ukuhlanganisa kunye nokuhambisa izitishi ezixhotyiswe ngokupheleleyo ngezixhobo zemveliso eziphambili kwimarike kwaye ziyafumaneka kwisiza. Njengenkampani eqinisekisiweyo ye-ISO engaphezulu kweminyaka eli-18 + yobungcali ebonelela ngokuchanekileyo kweenkonzo zentsimbi kubathengi bethu ekhaya nakumazwe aphesheya, u-Hengli uzinzile njengenkokeli yeshishini eligxile kulungiso lwevenkile kunye nemiboniso, iindawo zokuhambisa ezingenazintsimbi, Ukuvalelwa kombane kunye noluhlu lwamacandelo ezinto zorhwebo nezorhwebo.
Egqithileyo Inkonzo yokusika i-Laser
Okulandelayo: IZiko loLungiselelo